Herinandron'ny iMac 24-inch | Avy amin'ny mac aho
Herinandro iMac 24-inch
Azo atao izany fa ho an'ny maro aminareo amin'ity herinandro ity dia tena miavaka ary ny fahatongavan'ilay iMac 24-inch vaovao eo am-pelatanan'ny tompona vaovao dia efa akaiky. Amin'ity lafiny ity, ny orinasa Cupertino dia toa nanana olana tamin'ny fandefasana entana, fa ho an'ireo izay nitahiry ny fitaovana raha vantany vao navoaka izy io, efa mila mikasika ny tanany izy ireo.
Apple dia manao ezaka lehibe tokoa mba hanana tahiry faran'izay betsaka azo ampiasaina amin'ireny new 24-inch iMac tna amin'ny magazay ara-batana na amin'ny fivarotana an-tserasera. Tsy zavatra mora izany satria ny tsy fahampian'ny singa dia manasarotra ny fampitomboana ny tahiry saingy manohy miady izy hahazoana izay azo atao faran'izay betsaka.
Fiovana amin'ny baiko momba ny fandefasana
Tamin'ny herinandro lasa dia nahita fiovana na fihetsika vitsivitsy tao amin'ny fandefasana ireo iMac 24-inch ireo izahay, tamin'ny ankamaroan'izy ireo dia nasehon'izy ireo fa nalefa tamin'izay tokony ho izy mandritra ity herinandro ity ary azo antoka fa amin'ny ankamaroan'ny tranga ny zoma 21 mey ho avy izao hanomboka hanatratra ny tompony marina izy ireo.
Ny tahiry ankehitriny an'ny iMac 24-inch vaovao dia ambany ary nametraka fandefasana amin'ny herinandro farany amin'ny volana Jona noho izany dia fahatarana lehibe amin'ny fanaterana izany. Mety hoe rehefa mihena ny fangatahana an'ireo fitaovana vaovao ireo dia hihena ihany koa ny fotoana fandefasana azy fa amin'izao fotoana izao raha te hanana iMac vaovao ianao na inona na inona loko dia somary lava ny fiandrasana, lava kokoa noho ny mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Herinandro iMac 24-inch
Aorian'ny fisokafan'ny fivarotana Apple any Michigan dia misokatra daholo ny Apple Stores any Etazonia
Nahita sary famantarana "Lossless" vaovao ao anatin'ny kinova web an'ny Apple Music